octagonia casino dragona fikatsahana xi ny akon'ny fa saro-takarina ny vanim-potoana
mora famantarana dragona fikatsahana xi casino
manga ny rano fialan-tsasatra sy ny asa casino
Ny lehibe indrindra ny mpandresy tamin'ny 2010, i Daniel "Jungleman12" Cates, ary ny 2009 no lehibe indrindra amin'ny tantara, Viktor "Isildur1" Blom, hita ihany koa ny tenany eny, ho tsara tarehy mafy fito-tarehimarika manomboka.
Tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity dia nisintona niala ny tsy fahita firy feat amin'ny fifaninanana poker, mandresy ihany fifaninanana roa taona misesy izy, rehefa resy ny NAPT Mohegan Sun hetsika indray mandeha indray. Avy any 2011, i Erik Seidel dia efa iray amin'ireo mahomby indrindra mpilalao amin'ny tantara ny fifaninanana poker.
Nomena inona korontana taona dia efa noho ny orinasa, fa mendrika ny fahatsiarovana ny fiandohan'ny 2011 nijery amin'ny ankapobeny fotsiny toy ny fiandohan'ny maro anatin'ny taona vitsivitsy izay noho ny poker izao tontolo izao namely izany manan-karena slots update. Mandritra izany fotoana izany, ny eran-tany miaina fifaninanana fandaharam-potoana foana ny fironana vao haingana, ary mbola hitombo ny denser sy ny maro hafa isan-karazany toy ny mpijery manerana izao tontolo izao foana ny hahita ny fitiavana ny lalao dragona fikatsahana xi casino fitaka. Online Nosebleed Tsatòka Ny taona teo aloha dia efa tapitra amin'ny maimaika ny asa any amin'ny avo indrindra-ny tsatòka lalao an-tserasera, sy ny fiandohan'ny 2011 nahita fa fironana hanohy octagonia casino dragona fikatsahana xi ny akon'ny fa saro-takarina ny vanim-potoana. Tsindrio eto mba hamaky ny Fizarana 3, WSOP sy ny manodidina mora famantarana dragona fikatsahana xi casino. Nilaza rehetra ireo cashes isaina ho $4,497,387 ao winnings – mihoatra ny avo roa heny toy ny efa sendra nahazo tao anatin'ny taona iray monja hatramin'ny fotoana izay – ary izay rehetra amin'ny valo volana mbola mandeha ao amin'ny taona. Raha ny marina, ny zavatra Macedo ny tondra-malagasy fa maro ny peta-drindrina nidera raha ny marina mpanoratra Qureshi.
Larson nifarana Macedo ny fiahiana fa tsy niresaka momba ny chip-manary manga ny rano fialan-tsasatra sy ny asa casino.